Yiza wonwabele indlu yethu epholileyo engaselunxwemeni. - I-Airbnb
Yiza wonwabele indlu yethu epholileyo engaselunxwemeni.
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguWilliam & Robin
UWilliam & Robin yi-Superhost
Indawo engasemanzini eselunxwemeni, ikhitshi elipheleleyo, indawo yokubasa umlilo, amagumbi okulala ayi-3, iibhafu eziyi-1.5, ezisongiweyo kumgangatho nakwigaraji enamanzi ashushu. Zonke iifoto zisendlini okanye kumgama weemayile eziyi-40, ukukunika umbono wobuhle obujikelezileyo. I-Grand Marias yindawo encinci yomama kwindalo kuwo onke amaxesha amane onyaka. Idolophu enamazibuko amnandi kunxweme olusemazantsi eLake Imper, enamalwandle amaninzi, imizila engenazithuthi nezithuthi - ubuncwane be-Uwagen
I-Grand Marais yindawo encinci yomama kwindalo kuwo onke amaxesha amane onyaka. Zonke iifoto zisendlini okanye kumgama weemayile eziyi-40, ukuze ube nombono wobuhle obujikelezileyo. Sinekhaya elingasemanzini elinendawo yokubasa umlilo, ulwandle lwabucala, ikhitshi elipheleleyo, amagumbi okulala ayi-3, iibhafu eziyi-1.5, ukujikeleza iveranda kunye negaraji efudumeleyo.
Xa ikhephu libhabha, zininzi izinto onokuzenza apha: ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini nge-X country, ukutyibilika ekhephini, ukuhamba ngebhayisekile enamavili kunye nokutyibilika ekhephini kuyamangalisa kule ndawo. Indlu yethu iyindawo entle, etofotofo onokubuyela kuyo emva kokuba uchithe usuku uphumile ebandayo. Indawo entsha yomlilo enesitovu segesi. Sifumaneka lula kwiindlela zokuhamba ngekhephu eziyi-8. Ii-snowmobiles ziyafumaneka ukuba ziqeshiswe eGrand Marais, okanye ukuba uza nezakho, sinegaraji enamanzi ashushu ukuze sigcine ii-sleds zakho kunye nezinto zokuzikhusela ( kuquka izifudumezi ze-boot) e- ebusuku. Inxweme, indawo yethu iselunxwemeni lwe, yindawo yokuloba emkhenkceni. Nokuba yeyiphi indawo onokuzikhuphela kuyo ebusika, indlu yethu efudumeleyo netofotofo isembindini wayo yonke into.
Ngexesha leenyanga ezifudumeleyo sikwindawo efanelekileyo, unokuchitha iintsuku zakho kwindlu uphumle ngaselunxwemeni lwakho, uhamba ngephenyane elunxwemeni (kukho ii-kayaks), ukuqubha, ukuhamba ngesikhephe/ukuhamba ngesikhephe kunye nemililo yokukhempisha. Sikumgama okufutshane neevenkile neevenkile zokutyela kwidolophu, iAgate Beach emanzini amakhulu (indawo entle yokuzingela amatye!), kunye neNorth Country Trail. Ukuba ungathanda ukuya kuhlola, sikwimpuma yePictured Rocks National Lakeshore, apho unokonwabela ukunyuka iintaba ezintle ecaleni kweenduli ezinentlabathi, amaxethuka esihlabathi amahle, ichibi eliluhlaza elinamanzi, iingxangxasi ezintle, amachibi asemaphandleni, kunye namahlathi emaplanga asemaphandleni, iibhatyi, iidiliya kunye neendawo zokutshixa. Indawo yeGrand Marais ikwayindawo yemifudlana edumileyo. Kwiimayile eziyi-30 ukuya kumzantsi yiSeney National Wildlife Refugees eneentlobo zeentaka ezingaphezu kwe-200, iintlobo zeentlanzi eziyi-26, kunye nezilwanyana ezincelisayo eziyi-50-iphupha lomfoti wezilwanyana zasendle. I-Grand Marais ikwi-ATV/ORV trail 8. Ukufikelela kwigaraji yokugcina izinto ze-ATV/ORV ebusuku kungalungiswa. Kungakhathaliseki ukuba ufuna ukuchitha njani iholide yakho yasehlotyeni, sinayo yonke.
Kwi-autmn, amahlathi e-hardwood ajikeleze i-orenji, etyheli kunye nebomvu kunye nezikrini ezifanayo kunye nemithi ye-birch emhlophe. Imozulu intle kakhulu ekunyukeni intaba, ukuhamba ngebhayisekile, ukufota, ukukhwela kwiindlela ezinemoto nokunye. Ipholile kakhulu.
Naliphi na ixesha lonyaka, ikhaya lethu liyindawo entle yokuphumla ibe libukeka kakuhle, lihonjiswe emithini, libekwe ezibukweni.
PHAWULA: Ukhuseleko lweCOVID: Sinendlela engqongqo yokunciphisa iintsholongwane ibe sicoca kakuhle size sibulale iintsholongwane kuyo yonke indawo yethu naphakathi kwabantu abarentayo abaneemveliso ezicetyiswayo zeCDC. Yenza ingqondo yakho ikhululeke kule ndawo ikhuselekileyo, kude nezihlwele.
I-Grand Marias yindawo encinci yomama kwindalo kuwo onke amaxesha amane onyaka. Le yidolophu entle engaselunxwemeni olusemazantsi lweLake kunye nendawo entle ye-Uzar Ungachitha iintsuku zakho ngaselunxwemeni lwakho, sinee-kayaks onokuzisebenzisa kwitheku, uhambe kwiivenkile kunye neevenkile zokutyela, ukuzingela amatye kunxweme lweLake echibini, ukuhlola iiRocks National Lakeshore edlala kwiinduli zesanti, ukunyuka intaba esemntla ecaleni kweentaba ezinamatye amahle ajonge amanzi aluhlaza, iingxangxasi, ukuhamba ngephenyane, intaba okanye ibhayisekile enamavili, ukujonga imibala, okanye ukonwabela le ndawo yokuphumla njengekhaya lakho lokuphumla emva kweentsuku eziyi- ubhabha kwiindlela zokuloba, ukutyibilika izinja, ukuhamba nge-ATV okanye ukutyibilika ekhephini.
Umbuki zindwendwe ngu- William & Robin
Sifumaneka ngefowuni, ngomyalezo okanye nge-imeyile ibe sisenokuba sikwidolophu yakho xa useGrand Marais.